बौद्धनाथको क्षमा पूजामा झडप - अभियान खबर
बौद्धनाथको क्षमा पूजामा झडप
काठमाडौं – चिनियाँ लामा पक्षधर र बौद्ध घ्याङ गुठीबीच बौद्धमा झडप भएको छ ।
बौद्धनाथ स्तुपाभित्र आयोजना गरेको क्षमापूजा तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम बिथोल्न पुगेका गुठीका समर्थक र पुजाको आयोजक चिनियाँ लामा पक्षधरबीच झडप भएपछि बौद्ध क्षेत्र तनावग्रस्त भएको छ ।
प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको छ । तर, पूजा बिथोल्न गएकाहरुले चर्को नाराबाजी गरेका छन् । केही बेर पूजा रोकिएपनि प्रहरीको सुरक्षा घेरामा लामा गुरुहरुले पूजा गराइरहेको प्रहरी वृत्त बौद्धले जनाएको छ ।
जुम्ला/काठमाडौं : रगतमा म्याग्नेसियम र चिनीको मात्रा घट्दै जाँदा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुुटुको चालमा गडबडी देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा जटिलता थपिंदै जाँदा हृदय गति बन्द हुन सक्ने खतरा चिकित्सकहरूले औंल्याएका छन्। डा. केसीको रगतमा चिनीको मात्रा कम हुँदै गएको र उनले ग्लुकोज लिन समेत नमानेकाले अहिले ग्लुकोज नभएका अन्य आइभी फ्लुड दिइएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकत्रय […]
नेकपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताविच झडप
Posted on January 2, 2020 Author abhiyaan
नुवाकोट । नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर ५ दोबाटेमा बिहिबार दिउँसो नेकपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताविच झडप भएको छ । वडा नम्बर ५ दोबाटेमा रहेको दोबाटे–आठविसे–डि बगैचा सडकको उपभोत्ता समिति गठनको विषयलाई लिएर नेकपा र कांग्रेस कार्यकर्तावीच झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । झडपमा परी ३ जना घाईते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका […]
तनहुँमा कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजाललाई नेकपाको अवरोध